Manchester City ayaa si ku meel gaar ah u qabatay hogaanka Premier League kadib markii.. – Hagaag.com
Posted on 27 Janaayo 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Manchester City ayaa si ku meelgaar ah u qabatay hogaanka Premier League England, kadib guushii weyneyd ee ay ka gaartay West Bromwich 5-0 fiidnimadii Talaadada ee wareega 20-aad, halka Arsenal 3-1 uga badisay Southampton.
Goolasha Manchester City waxaa u kala dhaliyay Ilkay Guindogan (labo gool) daqiiqadaha 6 iyo 30, Joao Canselo daqiiqadii 22aad, Riyad Mahrez daqiiqadii labaad ee waqtigii nasashada ciyaarta qeybtii hore, iyo Raheem Sterling daqiiqadii 57aad.
Manchester City ayaa leh 41 dhibcood, si ku meel gaar ah hogaanka u qabatay iyadoo hal dhibic ay ka horeyso Manchester United, oo habeenka Arbacada wajaheysa Sheffield United isla wareegaas.
West Brom ayaa leh 11 dhibcood, waxayna ku jirtaa booska 19-aad.
Ciyaartii labaad, Arsenal ayaa guul soo laabasho leh ka gaadhay kooxda Southampton oo 3-1 ku badisay.
Southampton ayaa ku hormartay gool uu dhaliyay Stuart Armstrong daqiiqadii seddexaad, waxaa barbareeyey Nicholas Pepe oo Arsenal ka tirsan daqiiqadii 8aad, ka dib Bukayo Saka ayaa dhaliyay goolka labaad daqiiqadii 39aad, ka hor inta uusan Alexander Lacazette dhameystirin goolasha Arsenal daqiiqadii 73aad.
Arsenal ayaa leh 30 dhibcood iyada oo ku jirta kaalinta sideedaad, halka Southampton ay leedahay 29 dhibcood oo ay ku jirto kaalinta 11aad.